Hoso-doko menaka Aaron Miller an'ny Rapunzel, angano | Famoronana an-tserasera
Vao haingana isika no talohan'ny asa iray an'ny Tithi Luadthong izay misy fanamafisana manokana loko mafana sy eto an-tany, ary izany koa dia avy amin'ny mpanakanto iray hafa izay nanananay tamin'ny fiandohan'ny volana Yanjun Cheng, izay ahafahantsika manohy mahita fitsaboana loko sy teknika mahafinaritra.
Noho io antony io, rehefa mahita an'ity Hoso-doko menaka Aaron Miller antsoina hoe Rapunzel, tsy vitako ny nizara ny tenako tamin'ireto andalana ireto taminareo rehetra. Filentehan'ny masoandro iray hafa, fa ny mavo kosa dia miakatra eo afovoan'ny volony volamena sy saika tsy manam-petra ilay mahery fo ary amin'ny tsipika faravodilanitra izay manjavona rehefa mifangaro amin'ny tontolo.
Rapunzel dia angano avy amin'ny fanangonana ny Brothers Grimm. Tantaran'ireo majika izay nitantanan'i Rapunzel tamim-pitomaniana mba hahitana indray ilay printsy tsara tarehy, very rehefa nianjera tamin'ny tsilo izy rehefa nanandrana nihanika ny tilikambo nisy ilay malalany.
Ity Rapunzel ity dia miseho amin'ity lalao milalao an'i Miller ity pose tena tsara tarehy ary ny volo mena izay toa mamakivaky azy ny hazavana, milalao ny tonony izay mitovy be amin'ilay masoandro milatsaka saika hahatratra ny filentehany.
Hoso-doko menaka avo lenta izay mitondra antsika amin'ny angano izay nahitan'i Miller ny fanalahidy mety mampiseho sakafo matsiro amin'ny pose toy ny mijery ilay printsiny very ao anaty honahona rehefa avy nianjera tamin'ny tsilo.
Aaron Miller dia mivarotra pirinty an'ity asa ity avy amin'ny Inprnt amin'ny vidiny 20 dolara ny afisy 8 x 12. Manana iray hafa izy io asa be izay ialavirany amin'ireo karazana zavaboary sy andriambavy angano rehetra izay manana kalitao lehibe ao amin'izy ireo. Sary hosodoko harahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rapunzel amin'ny solika avy amin'i Aaron Miller
Valio i Micaela
"Ny fianakaviako manontolo dia teto" avy amin'i Tithi Luadthong